Oromo Free Speech: LEENCA GURMUUN BOBBA’E – Dirree Qabsoo
LEENCA GURMUUN BOBBA’E GALLI - MILKIIDHA!!
Hanga ijji koo danda’uttan bitaa mirga koo ilaale. Mukkeen gammoojjii aduu dadhabanii baalli irraa harca’ee qoraattii qofti ittafe malee waan ijji koo irra qubattun dhabe. Hundee mukaa tokko jalatti siqeen ammas ija kootiin waa barbaaduu ittifufe. Simbirroota lamaa- sadi ta’anii takka siiquun wal waamaa, takkammoo weedduun wal faarsaa mukarraa mukkatti ce’aa jireenya uumamaa waliin waldhaansoo qaban qofatu miira abdii wayii keessa namaatti yoo uume malee sagaleen abdii tokkollee waan jiru namatti hinfakkaatu. Iccitiin manaa nabaase garuu dhugaa kana waan geeddaruuf lafa lafa onaa fakkaatu kana keessa qalbiin koo waa dhaggeeffachuu hinlakkifne. Gammoojjii gogaa, bakkuma gurri namaa sagalee abdii dheebotu kana keessa abdii abdii caalutu jira. Abdii nam-tokkee qofa osoo hintaane, abdii saba guddaa, abdii saba roorroo ormaa hadheeffatee furmaataaf sochiitti jiruutu achi keessa jira. Otoon kanuma yaadaan buusee baasuu, “…geenyeerra!” jedhe namni karaa na qajeelchaa ture fuula gara kootti deeffachaa. Haltokko gara isaa miil’adheen ijaafi qalbii kootiin akka qeerransa beela’ee waa adamsuu bosona fuuldura koo jiru sakkatta’uutti deebi’e. Waan ijji koo argu dhugaa ta’uu isaa mameen miiraa gammachuufi rifaasuu walkeessoo tokkoon ka’ee dhaabadhe. Namoonni lama uffata bifti akka magariisuu uffatanii, qawwee gateettirra godhatanii, muka keessaan ulluuqaa gara keenyatti yoo dhiyaatanin arge. Inni dura deemu umriin ga’eessa yoo ta’u, qawween ani kanaan dura argee hinbeekne gateettiirra buufatee nama karaa na qajeelchaa ture nagaa gaafachaa miilaan gara kootti qajeele. Inni ittaanu kaa’ima reefuu yoo ta’u mataan cibiramee gurmuu keessa ciisu waliin yoo irra galchanii ilaalan leenca dheekkame fakkaata. Akka ilmoo haadhaarraa gargar turteen fiigee dabaree dabareen lamaan isaaniittuu harka maradhe. Qalbiin koo giduutti waa hedduu yaadattee imimmaan xiiqii ija koo keessaa harca’uu jalqabnaanan ciniinnadhee gadi dhoowwachaa jara gidduu bu’ee karaa ittifufe. Kabajamoo dubbistoota barruu kanaa, kana booda yeroofis ta’u keessummaa WBO ta’uuf jirtuutii yaadaaf qalbiin dhiyaadhaa!
Imala gabaabaa booda moonaa gootaa –goota daabee jigaa, kallacha qabsoo Oromoo, leenca roorroo jibbee gurmuun bosonatti gale, abdii Oromoofi Oromiyaa – WBO geenye. Waraan bakka bakka isaatti battala qabatee of eeggannoon sochii jiru hordofu yoon argu moonaan kun moonaa adda waraanaatti dhiyeenyaan jiru ta’uun tilmaame. Lafa qubsumaa gahee, gaaddifni boqqonnaa erga naaf tolfamee booda bishaan qabbanaawaan naaf dhiyaate. Ittaansuun shaayiin aannan waliin danfe naa gololchamee, dhangaa WBOn qopheesse waliin fuuldura koo gahe. Keessummaa WBO ta’uun akkam nama boonsa seetan! Dhangaa dhiyaate lilliqimsaa yaada sammuu kiyyaa dhaggeeffachuu ittifufe. “….edaa ilmaan saba kiyyaa rasaasa rasaan qolachuutti jiru! ….edaa ilmaan haadha kiyyaa mudhii jabeeffatanii sibiila hidhatanii, diina afaan qawween dabaree wal furee roorroof qe’ee saba isaanii dhuunfate afaan qawweetiin buqqisuuf murannoon diina waliin waldhaansoottii jiru! …edaa goota qabna…! Edaa dhiigni ilmaan Oromo nama gumaa baasuuf qaba! …edaa dhaadannoon diinaa goluma keessattii…..!?” Sammuun koo waa meeqa na yaade seetan.
Ilmaan Oromoo kaayyoo dhiigaan isaan qaqqabe dhiigaan galmaan gahuuf karaarra jiru. Ijoolleen WBO- fedhii namummaafi jireenya dhuunfaa hunda tuffatanii qooqa hidhatanii, hidhannoo jabeeffatanii, bilisummaa sabaafi walabummaa biyyaa dhugoomsuu akeeka godhachuun of kennaanii, diina saba isaanii goolu abiddaan kaaraa dhufettii godaansisuuf kuffisanii kufaa jiru. Isaaniif: haadhaa – abbaarra, obbooleessaa – obboleettiirra, dhalaa – ilmoorra, qabeenyaa – qananiirra…. kaayyoo sabaatu caala. Kaayyoof taanaan, wanti isaan waakkatan hinjiru. Tarii warri ammas mamiitti jirtan, akka kiyyaa fagaattanii otoo hindeemneyyuu ilmaan Oromoo mudhii hidhatanii sibiila qabatanii diina haadhaa fuulduratti tarkaanfachaa jiran qe’uma keessanittuu isin qaqqabuuf jiruutii – obsaa…!!
Amma doo’annaa koo gara xumuruu gaheera. Ta’us garuu dhimmoota lamaan boruuf hinbulfanneen harkaa qaba. Mooraan amma ittargamu kun mooraa madoon keessatti waldhaanamaa jirani. Qabsoo saabaa keessatti sabaa ofiif dhiiga ofii dhangalaasuun, qaamaa- ittihir’achuun, lubbuu- ittiwareegamuun, miira akkamii akka namatti uumu bakkatti argamanii abbichaarraa baruu caalaa ragaan dhiyaatu hinjiru. Kanaaf madoowwan naannoo kiyya jiran xinxaluun jalqabe. Namni nan madaaye jedhee kulkulfatu tokkolleen ijaan barbaadee dhabe. Kaayyoo bahaniifitu laalaa madaa nama hindhaggeeffachiifneef malee, madaatu madaa laafaa ta’eetu miti. Rasaasa qaama keessatti hafte akkuma nama qoraattii walii baasuu achumatti baqaqsanii wal keessaa guru. Warra muratee bayetu akka kana . Madaa ofii otoo hintaane madaa saba isaaniit dhukkbsatu. Isaaniif qabsoorraa hafuun kan danda’amu gaafa lubbuun isaanii wareegamte qofa. Gaafas ulfinaan gaalmee seenaa barri hinmoofessinerraa yaadatamu. Kanaaf kan madaaye yoom akka fayyee hidhannoo isaa mudhiitti deeffatee dhimma baheefitti deebi’u qofa yaada.
Amma doo’annoo koos xumureera, kan na hafe, boruuf milkii hawwee har’aaf nagaa dhaammachuudha Isa dura garuu “ ….. qabsoo sabaa galmaan gahuuf ilmaan Oromoo hundi bakka jiranitti waan danda’aniin hirmaachuu qabu. Waan dirreerra jiru atuu ija keen agarteetta. Oromoon human guddaa qaba. Humna kana warraaqsuun garuu hojii tokkoon tokkoon keenyaa ta’uu qaba. Gaafas warri har’a gargar qoodanii human saba kanaa laaffisuu yaalan abdii kotatu. Sabni keenya ulfinatti baha…” kuni dhaamsa Jaal Murataatti .. Anis kana caala waanan jedhu hinqabu. Akka adaa WBOtti dirqamaafi gaafa bobba’an “injifannoodha!” jechuun jaallan hafanitti nagaa dhaammatu. Anis “Injifannoodha!” jechaan hangan saganntaa dhibiitiin sinitti deebi’utti nagaa dhaammadha.
Posted by Oromo firee speech at 9:41 AM